ဖိုင်ကူးတာ မြန်ဆန်စေမယ့် TeraCopy Pro v3.26 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Computer software Copy and Transfer ဖိုင်ကူးတာ မြန်ဆန်စေမယ့် TeraCopy Pro v3.26
ဖိုင်ကူးတာ မြန်ဆန်စေမယ့် TeraCopy Pro v3.26
Maung Pauk at 1:16:00 AM Computer software, Copy and Transfer,
Windows မှာ Copy လုပ်ဖို့အတွက် Default Software ပါလာပြီးသားပါ.. တပ်ဆင်ထားတဲ့ Hardware အမျိုးအစား၊ လိုက်ဖက်တဲ့ Software တွေနဲ့ ကိုက်ညီရင် ဖိုင်ကူးရတာ မြန်ပါတယ်.. Windows မှာပါလာတဲ့ Default ထက် ပိုမိုမြန်ဆန်စေချင်ရင်တော့ Third party Software တစ်ခုခုကိုသုံးရပါမယ်.. TeraCopy ဟာ Windows Default Copy Transfer Speed ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်.. Pause/resume လည်း လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်..
Setup နဲ့ Install လုပ်..
အင်တာနက်ပိတ်ပြီး ကီးထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ.. 24.95 ဒေါ်လာတန် TeraCopy Pro v3.26 ကို အလကားသုံးနိုင်ပါပြီ..
Windows မှာ Copy လုပျဖို့အတှကျ Default Software ပါလာပွီးသားပါ.. တပျဆငျထားတဲ့ Hardware အမြိုးအစား၊ လိုကျဖကျတဲ့ Software တှနေဲ့ ကိုကျညီရငျ ဖိုငျကူးရတာ မွနျပါတယျ.. Windows မှာပါလာတဲ့ Default ထကျ ပိုမိုမွနျဆနျစခေငျြရငျတော့ Third party Software တဈခုခုကိုသုံးရပါမယျ.. TeraCopy ဟာ Windows Default Copy Transfer Speed ထကျပိုမိုမွနျဆနျအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျပါတယျ.. Pause/resume လညျး လုပျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ..
Setup နဲ့ Install လုပျ..
အငျတာနကျပိတျပွီး ကီးထညျ့ပေးလိုကျရုံပါပဲ.. 24.95 ဒျေါလာတနျ TeraCopy Pro v3.26 ကို အလကားသုံးနိုငျပါပွီ..
TeraCopy isacompact program designed to copy and move files at the maximum possible speed, providing the useralot of features: – Copy files faster. TeraCopy uses dynamically adjusted buffers to reduce seek times. Asynchronous copy speeds up file transfer between two physical hard drives.
Home Page : https://www.codesector.com/teracopy
Download TeraCopy Pro v3.26.rar : 3.3 MB